kabsadaan | Technology Computer Articles Global WebSite.WS | GVMG - Global Viral Suuq-Group
Computers: Talooyin Waayo Data Recovery
Technology Computer Articles Global WebSite.WS > kabsadaan
Markasta oo aad shil gaari ku adag ama aad lumiso xogta aad, youll u baahan tahay inuu ka soo leexdo soo kabashada xogta si fiican u soo celiyo macluumaadkaaga. kabashada Data waa wax dadka isticmaala computer ugu yaqaanaan, sida aqlabiyadda oo naga mid ah ayaa lahaa inuu ka soo leexdo soo kabashada xogta barta qaar ka mid ah wakhtiga. Inkastoo drives adag waxa ay noqonayaan wanaagsan oo fiican, waxay weli yihiin farsamo oo had iyo jeer la kulmaan dhibaatooyin. Waxa ugu horeeya in la sameeyo, ka hor inta uusan wax dhibaato ah ku dhici, waa in ay had iyo jeer uga xogta aad. Haddii ...
Waxaad ku kaysan kartaa xogta computer aad dhowr siyaabood oo kala duwan. Xogta lagu kaydin karaa on saxannada saari, drives adag, CDs, DVDs, iyo noocyada kale ee warbaahinta. Inkasta oo ay jiraan dhowr siyaabood oo aad ku hayn kartaa xogta, mar ka mid ah waqtiga qalabka internet ama farsamo gacmeed ku xidhan tahay in ay dumin, taasoo keentay in khasaare xogta. Inkasta oo qalab wanaagsan sannado shaqeeyaan laga yaabaa in, waxaa had iyo jeer dumin kartaa marka aad yaraan filayn, iyadoo jid ay Fogaan. drives adag tahay bilood ah ...
Computers: Wax ka qabashada Iyadoo Loss The Of Data
khasaare Data waa wax in uu noqon karaa mid aad u argagaxa leh. ay Haddii ganacsi la files muhiim ah iyo waraaqaha, ama qof leh sawiro qaali ah, iyo videos, badiyay xogta noqon kartaa xaalad aad u argagaxa iyo walaac. Haddii youve marnaba la kulmeen failure drive adag ama xogta laga badiyay ka hor, waa Yaabe Illeen waxay noqon kartaa xaalad ay aad naftaada ka heli yaabban wixii aad samayn. Waxba ma ahan wixii aad ku dhacaya, aad ku adkaysato shouldnt ama ha xaaladda hesho ugu fiican oo idinka mid ah. Inkastoo com ...
Computers: Waa maxay sababta in aadan isku daydaa inaad Data Recovery Naftaada
In dunida ka mid ah kombiyuutarada, kabashada xogta waa wax aynu wada ognahay oo ay ku tiirsan yihiin inuu ka soo kabsado lunsan oo xogta la la'yahay. Geedi socodka ah ee soo kabashada xogta waa mid aad u adag, mid ka mid ah waa in aad marnaba isku dayin in aad naftaada u samayn. drives adag gaar ahaan, waa mid aad u jilicsan oo u baahan daryeel gaar ah oo dheeraad ah marka ay ka shaqeeyeen. Waa inaad si taxadar leh ka kooban oo yar gudaha oo ka mid ah, taas oo sababta kaliya ee takhasus leh oo la tababbaray, waa in la isku dayay kabashada xogta. Marka ugu horraysa ee aad qaadato d adag ...
Computers: Halkee Data Recovery
All milkiilayaasha computer waxaa ogahay in drives adag oo u badan tahay in gabi doono mar ka mid ah waqtiga karaa. Inkastoo drives adag waxaa loo dhisay in ay socon oo u adkeysan wax badan oo, shilalka waa wax drives adag siinin si fiican u xamili. Inkastoo khasaaraha ka mid ah macluumaadka waa wax la filayay - kabashada xogta ay hubisaa in aad ujeedii drive adag aad ku guul dareysato marka aad u baahan tahay ugu. drive aad u adag waa mid aad u muhiim ah. Waxaa uu kaydiyaa dhammaan xogta iyo faylasha aad, oo xajiya, oo dhan ee aad impor ...
Computers: Luminta Your Mind Iyadoo Data Recovery
Waayo, ku dhowaad dhammaan dadka isticmaala computer, badiyay xogta noqon kartaa waayo-aragnimo aad u argagaxa leh. Haddii aad isticmaasho your computer ganacsiga ama arrimaha kale ee muhiimka ah, waxay noqon kartaa mid walwal badan iyo aad u argagaxa leh in ay lumiyaan bilood wax kasta oo aad shaqaysay, iyo in xitaa sano si ay u dhisaan. Inkasta oo aad dib kartaa ilaa xogta aad ku salaysan periodic, youll weli u baahan tahay si aad u hubiso gurmad ah si loo hubiyo in wax walba oo shuqullada. Waxba ma ay ahaan ka xun taageerto wax kor karaa, oo kaliya si aad u hesho bilood daahay ...
Aqoonsiga Xatooyo hanjabaad Times Our
Tirooyinka on xatooyo aqoonsiga muujiyaan sida badan kun oo qof ay saameeyeen, iyo tirakoobka, kuwaas oo sidoo kale muujinaya, in tiro badan oo doolar waxaa laga badiyay sanadkii. The bangiyada iyo hay'adaha maaliyadda lumin xaddi weyn oo lacag, iyo dadka shaqsi lumin lacag badan iyo sharafta. Labada lumin waqti aan la soo kabsaday karo baarayaan dambiyada iyo isku dayaya in ay ka qabato burburka lagu sameeyey. Dhibaatooyinka iyo lacag aad u qabatay in dadka waa in ay qaadaan precau kasta ...
DVD Copy 1 Guji Software ka dhigaysa Duplicating Your CDS A Breeze
Daawashada Movies internetka
Waad daawashada TV hal iskaanka fiidkii dhex reruns ka fekerayo waxa laíaanta sida yar jirto inay mar dambe u daawadaan marka trailer a movie fantastic on yimaado. Waa wax kasta oo aad ku jeclahay - jilayaasha xaq u, ismariyaan ah, tallaabada - oo qalbigiinna u dhaqdhaqaaqaa wax yar ka dhaqso la eegaayo - haddii keliyahoo aad aad u kari XAQA NOW!
An important and vital element of computer security is the ability to retrieve information that has been lost. Data recovery software solutions save a tremendous amount of time, lacag, headache and hassle. How many times have you been working on an important document only to have your computer quit or shut down before you can save your work? It happens from time to time, and its an enormous nuisance when it does. Nasiib wanaag, there are ways you can always protect and store y...
Talooyin Si Xafid Laptop Safe
Lahaanshaha computer laptop ah maalmahan waa sida ay muhiim u qabo mashiinka desktop aad. Waxaad u baahan tahay in ay helaan internet-ka, aad email, iyo macluumaad kale oo muhiim ah waqtiyada oo dhan. Its muhiim ah in la xasuusto in dhibaatooyinka la mid ah in dib u soo kabashada xogta, spyware iyo fiiruska keeni kartaa on your PC ayaa sidoo kale saamayn ku yeelan karaan computer laptop aad. Security for mashiinka aad la qaadi karo sidoo kale waa laab muhiim sababtoo ah khatarta ku lug leh isagoo aad laptop la xaday. Its sidoo kale aad u muhiim ah in aad Mak ...
Talooyin ku saabsan fahamka khatarta spyware iyo adware
Adware waa barnaamij in bandhigayaa xayeysiis ku saabsan computer ah in aad rabto ama ma. Waxa ay ku xiran oo aan kaliya in ay websites gaar ah ama software lacag la'aan ah, laakiin waxaa loo qorsheeyay si ay u bilaabaan ilaa markasta oo aad computer ayaa la demin on.
Shan Sababaha Si Isticmaal MICR Software Check Daabacaadda
Haddii aad ku qor badan oo jeeg, leedahay xisaab bangi badan, ganacsiyo badan ama isticmaalka pre-tiriyey jeegaga, MICR software daabacaadda idinka badbaadin doonaa waqti iyo lacag labadaba.
Kaabta Data iyo geedi socodka Recovery
Maxaad ugu baahan tahay Coobbi Window A
Waxyaabaha Ka Ogaato nadiif Windows
Windows nadiifiye waa qalab wax ku ool ah taas oo ka caawisa si aad u ilaaliso arimahaaga gaarka ah, nadiifiyaa kor u aruuray ee your computer iyadoo la fogeynayo files qashinka. Sida aad u isticmaasho computer, dhammaan hawlaha waxaa fuliya waxaa qortey. Dhammaan barnaamijyada software, ay ka mid yihiin Windows, socoto ah websites aad soo booqday - dukumentiyada aad u isticmaashay, iyo dhammaan hawlaha la mid ah inaad ka - oo iyaga ku kaydiso. A nadiifiye Windows waa aalad in ka saaraysaa oo dhan taariikhda dokumentiga aad Cr leeyihiin ...
Hard Drive Data Recovery Ma u baahan tahay inaad Hard
kabashada xogta drive adag noqon kartaa mawduuc adag tahay dad badan oo isticmaala computer cusub. Qofna ma rabo in ay aaminsan yihiin in ay xogta waxaa laga badiyay, oo dadka intooda badan wax fikrad ah sida loo soo celin karo. Nasiib wanaag, waxaa jira xogta adeegyada kabashada heli karaa in kaa caawin kara hawsha baaxad weyn oo soo kabanaya xogta aad lumay. article Tani waxaa loogu tala galay inuu kaa caawiyo in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan dib u soo kabashada xogta drive adag bartaan iyo sida aad u baran karaa wax dheeraad. drive A adag tahay a "non-kacsan" meel loogu talagalay in lagu kaydiyo ...
Sidee si uu u xaliyo Khaladaadka Windows XP
Back Up Your Data Or daaya Cawaaqibta The
Weligaa ma soo maray drive a failure adag? Sida caadiga ah, xogta aad la soo kabsaday karo drive fashilmay adag. Janet, macmiil soo maray drive horta failure adag guga ee la soo dhaafay, tani waa iyada story. Si fudud u sheegay, Janet ee computer kulaylku. Oo Janet helay screen buluug dhimashada. Ka dib markii shaashadda buluug, iyada computer ma Boot lahaa. Dhammaan ka mid ah hababka dhib caadi ah ayaa codsatay in ay waxba idiinma tarin. Sidaas, drive adag ayaa waxaa soo baxay in ay shirkad soo kabashada xogta diray. Warka wanaagsan ...
Data Service Recovery?
Maaraynta Xidhiidhada macaamiisha aad muhiim u tahay guusha ganacsigaaga; inaad halmaantaan macaamiishaadu aad biimayno. Iyada oo salka yar macaamiisha iyo nidaamka iibka fudud ee suuqa a xad ma guurto ah ganacsi ku shaqeeyaan laga yaabaa in Management ku ool ah Xiriirka Macaamiisha (CRM) xal ku salaysan kaadhadhka tusmada ama isbiriidhshiit fudud Microsoft Excel in ay sii xogta macmiilka. Marka caynkaas ah, Milkiilaha ganacsi yar yar ayaa laga yaabaa in ay sii macluumaadka macaamilka sida cinwaanka iyo gudodomiyaha ...
It's happened to the best of us. You're working late into the night all on an important document and all of a sudden, whether it's your fault or not, you lose all that work. The first thing that happens is we are reminded to save our work more frequently. Nasiib darro, that won't help at the time of our darkest despair, when hours of work is gone. Most Windows programs let the user press the CTRL-Z keys to undo what you just did. If that doesn't work, it may be time to l...
Caanka sii Hosting Siraaj
hosting Siraaj waa adeeg loogu talogalay websites in ay isticmaalaan horumarinta laambad. Laambad waa isutagga tiknolojiyada in la sharxo kaabayaasha server web, daydo barnaamijyada horumarinta software iyo aasaasidda qaybinta software. Kuwani waa barnaamijyada software free wada baakadeeyey oo loo isticmaalo in lagu ordo websites. Siraaj waa gaabinta ah kuwan soo socda: Linux A nidaamka qalliinka liisanka furan caan, waxa ay la mid tahay UNIX in ay qaab-dhismeedka, laakiin ma laha, sababtoo ah code UNIX hawlgala s UNIX ah ...
Sida loo Tuneup Your PC
Aad PC Fast Orod Mar By jadwalka A joogto ah Tune Up: Your computer waa sidaas oo kale gaari tartanka u wanaagsan! Labada waa in qibradiisa u hayo in uu ordo heer ay xawaaraha iyo qaab si mug leh. Si ka duwan formula ah 1 Si kastaba ha ahaatee goosh, aad PC waa mid fudud in wax ganaax-habayn, oo waxaan kugu hagi doona habka la tilmaan fudud oo tallaabo-tallaabo. Bilowga habayn-up ka dib helitaanka dhammaan barnaamijyada Mudanayaasha ku saabsan PC sida aad u rabto, waxaa jira hawlo yar oo kaa caawin doonaa ...
Time Saving Talooyin Mulkiilaha Site
Lahaanshaha web site oo ka muuqda on shabaqa noqon kartaa runtii xiiso leh. Ka dib markii sano ee adag, laakiin shaqo xiiso leh waxaa ku Abaal marin karaa a million dollars ama si fudud u dhici lagay. Habka keliya ee lagu hayo madaxiisa ka guuxeysa biyaha waxaa si joogto ah u bixiyaan qiimaha martida iyo maal waqti ay goob maalin ka maalin. Waxaa jirta waddo dadka waxaa wanaagsan in la sameeyo. Runtii mabaadii'da maaraynta waqtiga yar nolosheena si guul keeni kara iyo in la wanaajiyo lahaanshaha goobta si ay shuqulka runtii faa'iido iyo xiiso.
Software gurmad- Dayay inuu iibso Waxa!
Software kaabta waxaa loogu talagalay Shimbiraha! Kaabta Computer waa mid aad u adag, dhib aad u badan oo xanuun ah baadkiisa. Kaliya illoobin ku saabsan. Ma hayaan aad wayna dhawaaqi! Poppycock! Balderdash! fiiri, nolosha aan software gurmad oo kaliya waa si ka badan oo xiiso leh.
Muhiimadda ay leedahay in si fiican loo Security Waayo Your PC
online dunida waxay noqon kartaa meel cabsi leh iyo mararka qaarkood ka heli kartaa darana wiswis. From fayrusyada iyo spyware in ay xatooyo aqoonsiga internetka, macluumaadka ku kaydsan yihiin aad computer ka yar yahay weerar joogto ah oo waa in la ilaaliyo ee kharashka oo dhan. maxaad? Anonymous damiir joojin doonaa at waxba si aad u hesho macluumaad shakhsiyeed oo qaali ah, oo aad qabto in uu sii joogo hal talaabo hor iyaga ka mid ah si loo hubiyo in ay siinin. Halkaan hoose bilaabi our search for sababta waa in aan ilaaliyo kumbiyuutarada our la p ah ...
Diiwaanka Welwel Coobbi
Diiwaanka gaar ah Welwel Coobbi: Diiwaanka A badhtanka: Diiwaanka System Windows waxay leedahay qaar ka mid ah faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka oo ay ka mid: qaabeynta ee aad PC waxaa lagu hayaa oo kala duwan ka soo qaabeynta user. Dejinta siyaasado koox wax badan oo fudud oo maamulka by maamulayaasha. In ka badan shabakad, diiwaanka waxaa laga heli karaa oo maamula sidii mid item, iyo dhaqso u taageeray sababta oo ah goobta iyo size of faylasha diiwaan gaar ah. Iyadoo r dhexe ...
Mid ka mid Oo aayahiisu Kaliya In Order Ladnaansho Data ka furan Computer
kabashada Data waa cesashada xogta out-of-the-jidka ama wasakhaysan ka warbaahinta ayaa xoqo hab qaar ka mid ah. kabashada Data waa adoo isa soo taraysa more used iyo waa hab muhiim ah oo maalmahan. Waxaa jiray badan oo horumarinta ee kordhinta awoodda xasuusta aaladaha kaydinta xogta. Sidaas awgeed khasaare xogta ka mid hal dhacdo ayaa sidoo kale marna soo noqonayo mid aad u sarreeya. gudbinta ee xogta laga badiyay si weyn u kala duwanaan karaan. Waxaa laga yaabaa in aad waayo-aragnimo lahaa ee kaydinta homewor a ...
Pen Drive Sida Ultimate Mode The Si Data Transport
Waxaan ka yimaadeen meel fog ka jeer marka saxannada kumbiyuutarka ahaayeen hab in uu kaydiyo xogta iyo fuliyaan mid ka mid computer in kale. CD-ROM iyo DVD`s bedelay saxannada kumbiyuutarka gaadiidka xogta laakiinse waa waxyaalahaas oo dhan ma ahaayeen kuwo aad u anfacaya. Users kombiyuutarada wuxuu dhiranaan ugu wax oo ay qaadi karaan si fudud in ay jeebka iyo inkastoo isagoo wax yar oo keydin karaa qadarka wayn xogta. The kaxeeya Pen ayaa sida xal u this. Helitaanka iyo gaadiidka xogta ayaa la dhigay ilaa xad ...
Data Recovery Oo Back Up Waayo Email Macaamiisha
arrimaha computerka guud, fayruska, ama nidaamyada file qudhuntay waa mid aad u badan oo la joogo in wax is-dhaafsiga ama mail server iyo waxay keeni kartaa badan oo ka mid ah fariimaha email xafidayaa si aad u muuqata baaba'aan. Shirkadaha oo si xoogan ku tiirsan yihiin isgaarsiinta email iyo aadan haysan ups noqdaan heli this dhibaato garanweydaan. Laakiin kabashada xogta si gaar ah loogu talagalay dib u soo kabashada email hagaajin karaa dhibaatadan. Halkan waxaa ku qoran dhowr tusaale oo tallaabooyin u soo kabashada xogta in saddex ka mid ah kuwa ugu ballaaran loo isticmaalo macaamiisha email:
Sidee on Earth sameeyo shirkadaha iyo Ururada lumin Data?
Miyuu shirkadda soo gaaray khasaaro aad xogta? Waxaa jira sababo badan for this inta badan oo aan la aqbali karo. Fikradda ah gurmad xogta waxaa ka hawl yar ka badan aad u malaynayso. Si aad u ogaatid sida fudud, la awoodi karo oo iswada aad xal gurmad noqon kartaa, Akhriso ......
Data Recovery – Waxa la sameeyo marka aad Hard Drive guuldarraysato
Imisa jeer aad soo martay in daqaqamiyaan dareen marka wadid aad u adag si lama filaan ah ku guuldareysto? Imisa jeer aad soo martay in aad disk adag kaliya ma kabaha iyo xogta oo dhan in weligoodba la tagtay waxaa laga yaabaa in? A drive failure adag tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan oo qarow ugu xumaa soo food saaray ka shaqeeya computer adduunka oo dhan. data qiimo lumo midkood guriga ama jawi weyn shirkadaha. Maxaa la samayn karaa in xaaladahan? Well, waxaa jira xal qaarkood tha ...
kaabta Data – Ma leedahay qorshe gurmad iyo xogta soo kabashada meel
Waxaa jira siyaabo badan oo aad loo hubiyo in gurmad xogta aad si ammaan ah, akhri this article si aad u dhigi kara go'aan ah ku wargeliyay oo ay fuliso qorshaha ugu fiican ee aad u.
Solution The Si Helitaanka Your Khasaaray Files – Shirkadaha Data Recovery
Marka ugu xumaa dhacdo in aad computer iyo files oo dhan baaba'aan, marna ka walwalin! Waxaa jira tiro ka mid ah shirkadaha soo kabashada xogta tayada in ay awoodaan in ay soo celin aad files muhiim si fudud oo dhaqso. Halkii laaca baxay timahaaga ka badan computer madax adag oo la haysta in afduub file lagama maarmaan ah, ha walwal iska simbiriirixan iyo diri off wadid aad u adag in shirkad soo kabashada xogta. Shirkadahani waxay ka shaqeeyaan Sixirkooda ceshan files of tirada oo dhan ee t a la yaabka lahaa deg deg ah ...
Data Recovery – Waxaa laga yaabaa in aanay Si dambe ka dib All
Qeexidda Data Recovery Badbaadinta ee xogta laga badiyay ama la heli karo xogta horay waxyeello ku kaydsan warbaahinta dhaawacan kala duwan sida drives disk adag, cajalado magnetic, saxannada magnetic, saxannada zip, CD-Rom, Kaararka flash iyo warbaahinta kale kaydinta loo yaqaan kabashada Data. Tusaale ahaan xogta of file a kaas oo la tirtiray by shil qaar ka mid ah mar kale la soo kabsaday karo. Adeegga Recovery Data Bixiyeyaasha Waxaa jira kala duwan Bixiyayaasha Adeegga Recovery Data kuwaas oo ka shaqeeya ...
Drama ee Data Recovery
Hal daqiiqo, files yihiin oo dhan waxaa. daqiiqadii ku xigtay ay tahay jiheysteen.
USB Recovery Data la soo kabsaday karaa?
Marka aad ku kaydiso macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qalab USB ah, aad qaadato fursad ah laga badiyay macluumaad. Luminta xogta on USB ah waxay noqon kartaa nooc ka mid ah wax qarsoon, laakiin waxaa jira shirkado halkaas oo kaa caawin kara in aad dib u hesho xogta in.
Ogow Maxay tahay in aad wax ka qabashada: Macluumaadka Muhiimka ah Waa in aad ka ogaato Ka hor inta Bixinta Data Recovery
U dayactir oo uu ku kharribeen DBF Macluumaadka toos ah
DBF Recovery kabanayso burburay iyo kharribeen files DBF gebi ahaanba si toos ah. Waxaad noqon kartaa maamulaha database xirfadle ama laylis dhamaystiran - DBF Recovery cusboonaysiiyaan doonaa database jajabkii eegin aad waayo-aragnimo.
Nidaamka Recovery Data Waayo drives adag
Your xogta kombiyuutarada waa halis. Haddii aad isticmaasho Mac ama PC a, fayrusyada, mawjadahaa awood, Anonymous, baadi aadanaha, aafooyinka dabiiciga ah, Guuldarrooyin hardware, iyo in ka badan waa hanjabaad maalin dhab ah. Si xogta aad ammaan ah oo ka dhawaajiyaan, in aad marka hore u baahan doontaa inaad dib u kor u files aad si joogto ah. Marka labaad, markii aanu drive adag failure dhacaan, kabashada xogta waa xalka keliya. Dabcan waa aragti uga xogta iyo fogaado habka adag in uu yahay kabashada xogta wadajir, laakiin xataa w ...
New Data Recovery Technologies for saxannada NTFS Hard
kabashada disk NTFS waa geedi socod adag in kaliya ay qaban karaan takhasuska loo tababaray idin eryan doonaan xulashada of naftaada u jeestay adeegga kabashada xogta a. Nasiib wanaag, naftaada sidoo kale aad u samayn kartaa adigoo isticmaalaya haboon NTFS software kabashada disk.
Kaabta Data iyo Solution Recovery
Hubinta macluumaadka lagama maarmaan ah. Mar kasta hayso xog ah dib u soo kabashada iyo si aad nidaamka. Gaarsiinta in Data ilaa Back iyo Recovery Solution online.
PC shil! Sida loo helo The Best Consultant Data Recovery
Everyones PC hadda iyo mar kale bidbidayaan. Sidaas waxa aad samayn karto ka dib markii shil in laga baqdo? Kiro ah taliyaha Data Recovery. Waxaad ha wouldnt qof iska tuurina waraaqaha muhiimka ah ama files idinkaa, aad doonaynin? Well, siinin ha your computer heli iska leh in mid ka mid. Xitaa haddii aad ganacsi leedahay files gurmad, aad xogta weli waa halis ugu tirtirka. Taasi waa sababta ay u fiican in ay leeyihiin a taliyaha Data Recovery aad dhinaca. Marka shilalka drive adag, waxay noqon kartaa wax cabsi. Maxaa dhacaya haddii y ...
nbarnaamijyada for a soo kabsaday burburay Microsoft Excel files versions 97/2000 / XP / 2003/2007 (*.xls, *.xlsx, *.xlt, *.xltx, *.xlm, *.files xlmx).
Computer Hard Drive Recovery oo aannu ka helaynaa An Dibadda Back Up?
Technology has certainly come a long way in the past few decades. Gone are the huge contraptions that used to characterize computers. Maalmahan, waxaad si fudud u iibsan kartaa computer buugga in culeyskiisu yahay in ka yar a 6 pounds. Si kastaba ha ahaatee, mid wax hasnt bedelay. drives adag weli mararka shil iyo users ka careysan yihiin hadhay isku dayaya in ay ogaado oo kaliya sida loo sameeyo dib u soo kabashada xogta drive adag on iyaga u gaar ah. drives adag looma kaamil ah, inkastoo tusaalooyin theyre cajiib ah oo mechanica ...
S2s Ltd waa bixiyaha UK ka mid ah la talinta network iyo fulinta adeegyada loo baahan yahay ilaalinta xogta si loo hubiyo in la sii wado ganacsiga, xitaa haddii ay dhacdo burburka server a. Securstore soo xalka.
Data Recovery iyo Your Computer
kabashada Data for your computer
Sidee inuu ka soo kabsado photos lumay
Ma jirto baahi loo qabo in argagixin haddii aad photos digital ayaa ka libdhay ka wadid aad u adag ama kaadhka xusuusta. Xaaladaha intooda badan, photos si fudud loo soo kabsaday karo.
qalab Software for cusboonaysiintoodii a kharribeen Microsoft Excel * .xls, *.xlsx, *.xlt, *.xltx, *.xlm, *.files xlmx.
OST in convertor PST
Easy in ay isticmaalaan qalab OST2PST. Recovery qalabeed for Muuqaalka caawisaa si loogu badalo Microsoft Exchange * .ost files in Microsoft Outlook * files .pst.
Guide A Si Isticmaalka Adeegyada Fax Internet
Category 5 Cable & Cable Category 5E
Mini Spy Camera: Yar Noqo karaa Better
Soo saaridda Korontada Talooyin Iibsiga Machine
Soo saarida dhibsado adware From Your Computer
Xbox 360 – Waa maxay sababta Waxaad Bixiya Your Money On Waxaa
Wax lumay On Your Computer? Waxaa laga yaabaa in aanay xuma sidii aad u maleynayso
Dhadkan farqiga u dhexeeya xirayaan Machines Oo Machines xirxirida?
Internet Qarsoodi Client
Gadashada Computer A New 101: Aasaaska The
10 Web Site Essentials kaabta si aad u noolaataan habboonayd By
Down Iyada oo jahawareer Iibsiga Electronic
Online bixinayo Phone Mobile: qaado 10 Minutes Si Save 360 On Your Contract Phone Next Mobile
Maxaa Qof walba siduu u garan About Diiwaanka Nadiifiyayaasha
Waa maxay Xeerarka Scanner Police